Barista tena manokana izay mampiasa loko miloko hanompoana kafe | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa tao amin'ny trano fisakafoanana manokana no nahitanao mpandroso sakafo izay efa nanana tanana tsara nanompo kafe miaraka amina sary somary mahaliana amin'ny endrika rehefa araraka ny ronono. Ireo sary izay efa hitantsika tamin'ny tambajotram-pifandraisana indraindray.
Barista dia mpanakanto iray izay mampiseho amintsika ny toetrany mialoha amin'izany fomba manokana manokana amin'ny fisotroana kafe izany amin'ny fomba tsy azo inoana rehefa miasa amin'ny zava-pisotro samihafa na kafe misy kalitao isan-karazany. Mason Salisbury dia iray amin'izany ary manana fomba hafa anehoana izany kanto amin'ny fikarakarana kafe izany mba hamela antsika ho gaga kely amin'ny fitambaran'ireo loko.
Salisbury fa tsy mampiasa ny kafe hamoronana ireo sary tany am-boalohany, mampiasa fandokoana sakafo. Amin'izany no ahafahany mamorona sary vitsivitsy amin'ilay foam-bolo izay inoana fa mendrika hotononina ary afaka jerenao amin'ireo sary samihafa zaraiko.
Ireo endrika noforoninao dia matetika miolaka ary samy manana volom-borona daholo misy loko isan-karazany izay manome valiny samihafa arakaraka ny loko ampiasaina. Raiso ireo zavaboary ireo amin'ny fampifangaroana ilay ronono afangaroinao amin'ilay loko manokana alohan'ny hanompoanao azy ao anaty kaopy. Ary farany, mamarana amin'ny endrika miseho amin'ny olona sasany toy ny ravina maniry amin'ny rantsany izy.
Salisbury dia manana ny Instagram azy manokana izay matetika mizara endrika hafa Ity zava-kanto ity dia antsoina hoe baristas ho an'ireo izay manao io fomba manokana io amin'ny fikarakarana kafe, na dia eto aza misy mampiavaka azy rehefa mampiasa karazana loko hafa. Azonao atao ny milaza fa ny fisotroana kafe dia tsy mitovy loko amin'ireto izay atolotry ity mpanakanto antsoina hoe Salisbury ity.
Volana vitsivitsy lasa izay dia nanana isika ho an'ity artista ity izay mampiasa kitapo dite ho toy ny lamba lamba hanehoany ny heviny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Manompoa kafe iray kapoaka amin'ny fomba kanto
Toetra telo tokony hodinihina rehefa mamorona sary masina